Uru Ofufe Daybọchị: Uwa Na-ekwu Okwu Chineke | Ilblogdellafede
Ezi nrara nke taa: uwa kwuru banyere Chukwu
1. Igwe-igwe na-ekwu maka Chukwu, tụgharịa uche n’elu kpakpando nke igwe, gụọ kpakpando ole na ole, hụ mma ya, nchapụta ya, ọkụ ya dị iche iche; tụlee mgbe nile nke ọnwa n’usoro ya; lebara anya na ebube nke anyanwu… Na elu igwe ihe obula na agaghari, mgbe otutu otutu otutu otutu aga, anyanwu esighi na uzo milimita wezuga onwe ya. Nke ahụ ọ́ dịghị egosi na ị na-eme ka uche gị dịrị n’ebe Chineke nọ? You na-agụghi ka Chukwu nwe ike n’eluigwe?
2. speakswa na-ekwu maka ịdị mma nke Chineke.Gbanwee anya gị ebe niile, lelee ifuru kachasị mfe dịka ọ masịrị gị dum! Lebe anya n’oge ọ bụla, mba ọ bụla, ihu igwe ọ bụla na-egosi mkpụrụ ya, dị iche iche, ụtọ, ezi omume. Chọsọ alaeze nke ndị ọrịa n’ọtụtụ ụdị: otu na-emegharị gị, nke ọzọ na-enye gị nri, nke ọzọ na-ejere gị ozi nwayọ. You naghị ahụ nzọ ụkwụ Chineke, ezigbo, onye nkwenye, hụrụ n'anya n'ihe niile dị n'ụwa? Gịnị ma ị cheghị maka ya?
3. Mmadu na-ekwuwapụta ike nke Chineke A kpọrọ mmadụ obere ụwa, na-ejikọ n'ime onwe ya ihe kacha mma mara mma gbasara agbasasị na okike. Anya mmadu n’onwe ya n’enwe obi uto na onye na-eche banyere nhazi ya; kedu maka usoro ahụ dum, nke ziri ezi, nke na-agbanwe agbanwe, nke na-egbo mkpa ọ bụla nke ahụ mmadụ? Kedụ banyere mkpụrụ obi nke na-enye ya ọdịdị, nke na-eme ka ọ dị elu? Onye gosiputara, gua, hu, hu Chineke n’anya n’ihe nile, ma gi onwe gi, site na uwa, imara ka esi eweli Chineke?
OMUME. - Muta taa site na ihe obula iji bulie onwe gi elu nye Chineke. ma ahụghị m ya n'anya!
← Na post gara aga Gara aga post:Nraranye nye Nna nke Nna raara nye ọnwa nke August
Ọzọ Post → Post ozo:Ọgọst 1, nraranye nye Sant'Alfonso Maria de'Liquori